samedi, 24 octobre 2015 08:44
Toamasina : Toaka gasy 840 litatra tratra
Niainga avy any Saranazy, Kaominina Ambodilazana ireto toaka gasy ireto ary saika hamidy ao Toamasina no saron’ny polisy tao Betainaomby niaraka tamin’ireo roalahy nitondra azy. Notsinjaraina tamina jerikana miisa 24 ny toaka. Raha ny lalàna dia miankina amin’ny fandoavan’izy ireo ny sazy 1.000 Ariary isaky ny litatra ny famonjana azy roalahy ireo na tsia.
samedi, 24 octobre 2015 07:54
Fisolokiana : Olona roa naiditra am-ponja ao Toamasina
Milaza ho mpampitombo vola hay misoloky gaigilahy. Vola fito tapitrisa Ariary be izao no lasibatra tao Tanambao V Toamasina. Dimy lahy no niketrika azy saingy tafaporitsaka ny telo raha tonga hisambotra azy ireo ny polisy, ka ny roa no tratra ambodiomby niaraka tamin’ireo fitaovana fampiasany.
Depioten’i Tolagnaro Ijo.
vendredi, 23 octobre 2015 19:13
Kere any atsimo : «Tena misy» hoy ny depioten’i Tolagnaro Ijo
Tsy misy tokony hanafenana ny fisian’ny kere any atsimo hoy ny depioten’i Tolagnaro Ijo. «Inona no mahatonga ireo mpitatitra vaovao any amin'ny fitondrana foibe hilaza fa tsy misy zany kere zany any atsimo. Mety hofitadiavana ranondranony sy misolelaka no ao ambadik'izany», hoy izy manohy ny fanazavana. Tsara hoy ity solombavambahoaka ity raha manadihady any ifotony ireo haino aman-jery sy gazety an-tsoratra tsy miankina ahafantarana ny zava-misy marina, hialana amin’ny honohono. Fa manaitra ny fitondrana ihany koa ny depiote Ijo fa efa enin-taona izao no tsy nanana kianja fanaovam-baolina ny tanora any Tolagnaro, taorian’ny nitrongisana ny ao Ampasamasay. Hampiantrano ny fifaninanana nasionaly amin’ny fanatanjahantena an-tsekoly anefa ny DREN Anosy amin’ny taona 2016. Ho avy ao an-drenivohitry ny faritra Anosy ny mpianatra avy amin'ny DREN 22 manerana ny Nosy, nefa tsy misy ny foto-drafitr'asa handraisana an’izany.
Reverend docteur RAKOTONIRINA David izay filohan'ny SPanta
vendredi, 23 octobre 2015 17:52
Ady tany FLM Androhibe
Nahazo fandresena teo anivon'ny fitsarana ry zareo teo anivon'ny FLM raha ny fanambarana nataon'ireto mpitarika ny Fiangonana ary miantso ireto farany mba tsy hisian'ny fiantsiana intsony, hoy ny Reverend docteur RAKOTONIRINA David izay filohan'ny SPanta.
Zaza nihetraketrahan'ny foroches Sambava
jeudi, 22 octobre 2015 22:12
Sambava : Mifamono ny samy mpianatra, zazalahy 12 taona vaky loha
Vao manomboka ny taom-pianarana dia raikitra sahady ihany koa ny fifamonoana eo anivon'ny ireo andian-jatovo ao Sambava, maka tahaka ny fihetsika mahery vaika ataon’ny «Foroches» any Antsiranana. Androany alakamisy hariva, avy nirava mpianatra tokony tamin'ny 5 ora sy sasany teo, dia raikitra ny tora-bato sy tifitra flesy efa novatsiana tany anaty kitapo nifanaovna andiana mpianatra, ka ny avy ao Antanifotsy nifampitana tamin'ny mpianatra avy ao Antaimby (Atsimo sy Avaratra).
jeudi, 22 octobre 2015 08:53
Antsirabe : Hanomboka anio ny festival Z'Ovy
Andiany faharoa ny amin'ity, handraisan'ireo Distrika fito mandrafitra an'i Vakinankaratra anjara, ka hibahana amin'izany ny fampirantiana ireo vokatra mampiavaka ny isan-distrika. Hisy koa ny fifaninanana ara-kolontsaina.
mercredi, 21 octobre 2015 22:50
Belo Tsiribihina : Tovovavy kely 13 taona maty main’ny vilany nandrahoana hena
Niteraka famoizana ain’olona ny lalao moraingy tao Tsaramandroso - Belo/Tsiribihina ny fiandohan’ny herinandro ity. Nitangorona niaraka tamin’ireo namany mba nijery ity karazana diamanga nentim-paharazana ity io tovovavy kely io. Fety rahateo ny andro tamin’io.
Faritra iva dobon-drano
mercredi, 21 octobre 2015 22:33
Sarotra vao tafavoaka ny trano ny mponina
mercredi, 21 octobre 2015 16:59
Fanafody saika namono
Tandremo ihany ny fanafody vidiana etsy sy eroa, fa soa ilay ranamana fa nanapaka ilay fanafody alohan'ny nihinanana azy, kay nisy tariby tao anatiny.
mercredi, 21 octobre 2015 08:33
Photo: Sobika Antsohihy
Antsohihy : Nirotsaka ny orana manamasaka manga
Latsaka na navy voalohany ny mahalegny (orana) tao Antsohihy renivohitry ny faritra Sofia halina tokony tamin’ny folo ora. Izany manambara fa tonga ny vanim-potoanan'ny mahalegny. Mbola mankamasaka sy mahamamy manga aloha araka ny fahitana azy satria tsy dia mafy no tsy dia ela loatra fa teo amin’ny antasakadiny ihany izany.
Page 623 sur 638